ePR dia Breaking Marketing ... any Eropa | Martech Zone
GDPR dia natolotra tamin'ny Mey 2018 ary tsara izany. Tsara izany. Tsy latsaka ny lanitra ary nandeha tamin'ny androny ny rehetra. Ny sasany tsy misy fanelingelenana noho ny hafa. Nahoana? Satria izy io dia nanome toky nomen'ny olona teratany eropeana iray ny fanekena manokana, mazava, tsy misy porofo mazava tsara alohan'ny ahafahan'ny orinasa mandefa mailaka azy ireo.
Fa andao hamerina.
Moa va tsy ireo goavam-bola amin'ny automatisation marketing eto amin'izao tontolo izao, ny HubSpot, Marketos sns dia nilaza tamintsika fa mpanjaka ny atiny?
Raha mamorona azy ianao, ary manisy vavahady azy ary mampiroborobo azy dia ho avy izy ireo!
Mamorona atiny tompon-daka x10, manatsara azy, manaova bilaogy momba azy io ary ho hitan'ny vinavina, sintomy izany ary ho hitanao ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo ary ho afaka hikolokolo azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fampielezana mailaka mandeha ho azy miaraka amin'ny fanairana natao hampahafantarana anao rehefa vonona ny hividy (satria ho eo amin'ny tranokalanao izy ireo ary hijery ny faran'ny votoatin'ny fantsom-pianarana, ohatra, ny fandinihana tranga, ny vidin'ny demo sns.).
Tsy izao intsony - tsy eo amin'ny tontolon'ny B2C ihany. Rehefa ampidinin'izy ireo ilay atiny tompon-daka x10, ary avelany ny antsipirian'ny fifandraisany dia mila manisy boaty kely izy ireo milaza hoe:
Faly aho fa mandefa mailaka amiko indraindray ianao momba ny varotra sy ny varotra.
Ka… iza no hanaiky an-tsitrapo ny hafatra momba ny varotra sy ny varotra?
Ary noho izany dia tapaka ny fizarana nentin-drazana / fidirana / mailaka fanintonana-hikolokoloana-akaiky ho an'ny varotra B2C.
Dia tonga ny feon'ny fihomehezana.
"Inona izany tabataba izany?», Hoy ireo mpivarotra B2C, ny tarehin'izy ireo dia voaloton'ny olona mijery mpampijaly masiaka.
Ny tabataban'ireo mpivarotra B2B sniggering.
Hitanareo fa ny GDPR dia tsy nanimba ny marketing amin'ny mailaka B2B (izay mazàna malefaka hatrany hatrany). Ianao izao dia mila manaporofo fa manana fototra ara-dalàna amin'ny fifandraisana mailaka mangatsiaka ianao. Mety ho fanekena. Fa mety… tombony ara-dalàna. Raha mbola azonao atao:
… Asehoy fa mitovy amin'ny fomba ampiasanao ny angon-drakitry ny olona, ​​misy fiantraikany kely amin'ny fiainana manokana, ary tsy ho gaga ny olona na mety hanohitra ny zavatra ataonao…
Biraon'ny vaomieran'ny fampahalalana, Ny lalàna mifehy ny orinasa ka hatramin'ny marketing amin'ny orinasa, ny GDPR ary ny PECR
Ary ny mpivarotra B2B dia nanao ahitra raha mbola niposaka ny masoandro.
Tsy namirapiratra ela be anefa.
Ny Fitsipika ePrivacy (ePR raha fintinina) dia hanolo ny torolàlana ePrivacy eropeana amin'izao fotoana izao (izay adika amin'ny fomba hafa kely mihitsy manerana ny firenena mpikambana EU - any Angletera dia fantatra amin'ny anarana hoe PECR).
The Nitatitra ny DMA tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa izay nitaky ny ePR… 'misafidy an-tsitrapo hanaiky ny varotra mailaka B2B rehetra'.
Tsy misy lisitra intsony. Tsy misy fisintomana intsony ho takalon'ny antsipirian'ny fifandraisana. Veloma marketing amin'ny mailaka B2B. Goavana izany.
Ohatra, miasa matetika amin'ny sehatry ny informatika any Angletera aho. Ny fantsom-baovao IT dia miorina amin'ny fitifirana mailaka. Indostria B2B maro no. Noho ny lesoka rehetra dia mbola manolotra ROI maharesy lahatra ary ho an'ny orinasa kely kokoa, no hany karazana marketing heverin'izy ireo fa zakan'izy ireo (bebe kokoa amin'izany).
Raha misy mieritreritra an'ity lalàna ity fa henjana tsy misy fotony ary mety ho tsara ny marketing amin'ny mailaka B2B, ilaina ihany koa ny mandinika ny fiantraikan'ny ePR amin'ny cookies.
Tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity, namoaka ny mpanolotsaina mahaleo tena iray an'ny fitsarana avo an'ny EU, Advocate General Szpunar hevitra amin'ny cookies ary tamin'ny ankapobeny dia nilaza fa ny boaty fanekena cookie efa voafintina dia tsy nahatanteraka ny fepetra momba ny fanekena manan-kery satria ny fanekena dia tsy mavitrika na omena malalaka.
Firy ny tranokala fitsidihanao an'ireo mpanao ady totohondry efa voafidy? Marina ny ankamaroan'izy ireo?
Izahay dia mijery ny zava-misy amin'ny ho avy izay tsy ahafahanao mandefa mailaka amin'ny olona any amin'ny orinasa (raha tsy manaiky an'izany izy ireo) ary tsy afaka manara-maso olona ianao rehefa ao amin'ny tranonkalanao (raha tsy misafidy cookies izy ireo). Ny singa cookie amin'ity faminaniana ity dia tonga tany UK: ny Nilaza i ICO fa ilaina ny fanekena amin'ny cookies tsy ilaina ary fantatrao fa, ny analytics dia mianjera eo amin'ny sokajy tsy ilaina (mankanesa ao amin'ny tranokalan'ny ICO - novonoina ny analytics raha tsy izany * gasps of horror *).
Ny ePR dia tokony havoaka miaraka amin'ny GDPR saingy nahemotra. Mila fotoana ny fanamafisana ny fanitsiana ao amin'ny Parlemanta eropeana ary tsy misy daty famoahana ofisialy (bilaogy vitsivitsy ara-dalàna no mety tsy talohan'ny 2021) fa ho avy io ary misy fotoana kely sarobidy hanomanana.
Na antsoinao hoe funnel na flywheel io dia toa tapaka ilay metodônika miditra taloha.
Ka nanontany ny mpiara-miasa aminay amin'ny marketing izahay hoe inona no hatao (ny resaka amin'ny mailaka isan-teny azo jerena ao amin'ny bilaoginay), fa TL: DR: adinoy ny fikolokoloana, mankanesa any ambanin'ny fantsom-batana, vonona hividy fitarihana - prospecta mahay be.
Ary tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho.
Ny zavatra tsara dia, SEO (vita tamin'ny fomba tsara), dia mbola velona be ary mandaka. Ny fikarohana biolojika dia mbola mandray ny ankamaroan'ny tsindry mifanohitra amin'ny doka misy karama (ity ny angona farany an'ny clickstream amin'izany) ary Google dia maniry anao hanana ny marina SEO ary nanamora kokoa noho ny hatramin'izay mpitarika lehibe ary kinova nohavaozina amin'ny Search Console.
Manomboha mijery ny mety ho vokatry ny ePR amin'ny orinasanao. Hatraiza no ianteheranao amin'ny marketing amin'ny mailaka? Firy amin'ny tahiry data B2B no nisafidy anao? Azonao atao ve ny mamerina manome alalana azy ireo mialoha? Ianao ve mila manitsy ny ezaka automatique marketing hifantoka amin'ny fampisondrotana ny mpanjifa efa misy fa tsy hikolokoloana ireo vaovao? Moa ve ianao miasa am-pahavitrihana amin'ny piraofilin'ny fikarohana organika anao? Ary ny tena zava-dehibe, inona no hataonao izao, mila mpampiasa anao hanaiky ny fanarahana ny tranokalanao ianao? Alaharo ny fantsonao hafa ary vonona handray ilay malaina, ary avy eo isaky ny ampidirina ePR, na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny farany, dia tsy havela ianao haka ireo sombin-javatra.
Tags: b2beprivacyfameperana eprivacyeumarketopecrfitsipika momba ny fiainana manokanalalàna
Luke Budka dia talen'ny TopLine Comms, masoivohon'ny PR nomerika sy SEO.
Ahoana ny fomba fitehirizana ny fanentanana fananganana rohy ateraky ny tolona ateraky ny tolona